Hupenyu Hwechokwadi Hwepasi Hwechokwadi Hupenyu neHodges Unganidzo »Hodges U
Categories: Hodges Unganidzo
Uri Iwe WeMushandi Unotarisa Kuti Uwane Kukwikwidza Edge Pamusoro PeMakwikwi Ako? Sarudza Hodges Connect
Sei? Iyo yakasarudzika tsika tsika, Hodges Unganidzo ndiyo kiyi yekuvaka yako kutangazve uye kufambisira mberi basa rako.
Unogona kusarudza mashopu, makirasi, uye zvirongwa zvinokupa iwe hunyanzvi hwekukasira iwe kwaunotora kuti ushande newe zuva rinotevera. Uyezve, iwe unowana kutsigirwa kweye 30-gore redzidzo yepamusoro institution uye iyo Hodges University zita. Asi zvakasiyana ne yechinyakare degree kana chitupa, iwe unosarudza izvo chete zvinokubatsira iwe kukwira kumusoro kubva pachinzvimbo chako chazvino. Kunyangwe iwe uine degree kana kuti kwete, izvi zvitupa zvinokutendera iwe kumira pamusoro pemakwikwi ako mumusika wemabasa wanhasi.
Kwete Pre-Yekupinda Kuedzwa
Kwete Yakare Koreji Chiitiko Chinodikanwa
Kwete High Chikoro diploma inodiwa
Ese aya aiwa anowedzera kumusoro kune Hungu hombe iwe! Unoda rumwe ruzivo?
Bata A Hodges Batanidza Mumiriri
Vashandirwi, Nei Hodges Yakabatana?
Vashandirwi vari kukumbira mhinduro dzekuvhara hunyanzvi hunyanzvi. Hodges University iri kupindura iyo kudana neayo nyanzvi yekudzidzira chirongwa, Professional Dzidzo uye Kudzidzisa (PET), inonzi Hodges Connect.
"Hodges Connect yakagadzirirwa kugadzirira vashandi pamwe nehunyanzvi-hunodiwa hunyanzvi hunodiwa kuti ubudirire mumisika yemabasa nhasi uye mangwana," akadaro Dr. John Meyer, purezidhendi weHodges University. “Iyi chikuva nyowani inogona kugadziridzwa kuti ienderane nechero indasitiri uye yoendeswa kune vanhu kana boka rekambani. "Izvi ndezve kungopa vashandi vedu mukwikwidzi."
Ndeapi maindasitiri Anogona Kubatsirwa Kubva Chirongwa Ichi?
Sangano rega rega muindastiri yega yega rine chimwe chinhu chekuwana nekusimudza hunyanzvi hwakagadzirirwa vashandi vayo.
Ndeapi Misoro Iyo Hodges Inobatanidza Kuvhara?
Masangano pamisoro ine chekuita nebhizinesi, kutaurirana, hutungamiriri, uye kusiyana. Mienzaniso inosanganisira:
Misiyano Yenyika mukushanda
Kufamba kubva kune Vezera kune Mutungamiriri - Kudzidziswa kweManeja Mamaneja
Kutungamira Kupfuura Shanduko
Mutauro Wemutauro Basics
Bhizinesi uye Kutaurirana
Chitupa Chehunyanzvi Chekubudirira (PEC)
Kubasa Kunokosha Chitupa
Chekutanga Mutsara Supervisor Chitupa
AWS Academy Cloud Nheyo
Zvinokosha zveGrafiki Dhizaini (Adobe CC)
Zvinokosha zveWebhu Dhizaini (Adobe Dreamweaver)
Pedzisa Tekinoroji Kosi Rondedzero
Pedzisa Abobe Course Chinyorwa
Mhando dzakasiyana dzeCPR / Yekutanga Rubatsiro / Yekutanga Hupenyu Hutsigiro Kudzidziswa.
Heartsaver Chekutanga Rubatsiro CPR AED
BLS (Mudzidzisi Akatungamira uye Akasanganiswa)
Iyo PET Hodges Connect Initiative ine zvimwe zvirongwa uye zvirongwa zvekuenderera mberi nekuwedzera mitsva mitsva sekudaira kweindasitiri.
Dzvanya Pano Kune Rakazara Rondedzero yeHodges Batanidza Zvirongwa